Ixesha lokuthenga kunye ne-FAQ- iPandawill Technology Co, Ltd.
I-Pandawill i-odola njani izinto ze-Turn-Key oda?
Si-odola ngqo ityala lakho lezixhobo zoku-odola i-5% okanye i-5 eyongezelelweyo kwizinto ezininzi. Ngamaxesha athile sijamelana neodolo / ubuncinci beodolo apho izinto ezingaphezulu kufuneka zithengiwe. La malungu ayaqwalaselwa, kunye nemvume efunyenwe kumthengi wethu ngaphambi koku-odolwa.
Kwimisebenzi ephambili, yenza ntoni iPandaw malunga nenxalenye yokuwela okanye ukufaka endaweni?
IPandawill inokunceda ekubambeni uluhlu, kodwa asizukufaka ezinye izinto kwibhili yakho yezinto esele sinazo. Singacebisa iminqamlezo okanye sincede ekukhetheni izinto xa kukho imfuneko, kodwa siya kuthumela iphepha ledatha ukufuna imvume yabathengi ngaphambi koku-odola.
Leliphi ixesha lokukhokela kwi-odolo yesitshixo sokujika?
Ixesha 1.Procurement phambili ukongeza kumaxesha ibandla phambili.
2.Ukuba si-odola iibhodi zesekethe, kwiimeko ezininzi eli lelona xesha lide lokukhokela, kwaye kumiselwa ziimfuno zabathengi.
3. Zonke izinto kufuneka zifunyanwe ngaphambi kokuqala kwenxalenye yomyalelo.
Ngaba iPandawill ingayalela nje izinto okanye ibhodi yesekethe yam?
Ewe sinoku-odola kanye le nto ufuna ukuba usinike yona, kwaye unokubonelela ngeseleyo. Sibhekisa kolu hlobo lweodolo njengomsebenzi oshiyekileyo wokujika.
Kwenzeka ntoni kumacandelo ashiyekileyo kwii-odolo ze-Turn-Key?
Izinto ezineemfuno zokuthenga ezisezantsi zibuyiswa neePCB ezigqityiweyo okanye iPandawill inceda ukubamba uluhlu njengoko kuceliwe. Zonke ezinye izinto azibuyiswanga kumthengi.
Yintoni ekufuneka ndiyithumele kwi-odolo yesitshixo sokujika?
I-1 Bill yezinto eziphathekayo, igcwaliswe ngolwazi kwifomathi ephezulu.
Ulwazi olugcweleyo lubandakanya -igama lomenzi, inombolo yenxalenye, uyilo lwe-Ref, inkcazo yecandelo, ubungakanani
3.Iifayile zeGerber ezigqityiweyo
Idatha ye-4 yeCentroid-le fayile inokwenziwa yiPandawill ukuba iyafuneka.
Kuthiwani malunga nezinto ezibuthathaka?
Iiphakheji zecandelo le-SMT ezininzi zithatha ukufuma okuncinci ngokuhamba kwexesha. Xa ezi zinto zidlula kwi-oveni evuselelekileyo, oko kufuma kunokwanda kwaye konakalise okanye kutshabalalise i-chip. Ngamanye amaxesha umonakalo unokubonwa ngokubonakalayo. Ngamanye amaxesha awukwazi ukuyibona kwaphela. Ukuba sifuna ukubhaka izinto zakho, umsebenzi wakho unokulibaziseka ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48. Eli xesha lokubhaka alizukubala ukuya kwixesha lakho lokujika.
2. Silandela i-JDEC J-STD-033B.1 esemgangathweni.
3. Oko kuthetha ukuba ukuba eli candelo libhalwe njengonobuntununtunu okanye livulekile kwaye alinalebheli, siya kugqiba ukuba lifuna ukubhakwa okanye sikubize ukuze ubone ukuba kufuneka kubhakwe.
4. Ngeentsuku ezi-5 ne-10 ezijikileyo, oku mhlawumbi ngekhe kubangele ulibaziseko.
5. Kwimisebenzi yeeyure ezingama-24 neyama-48, imfuneko yokubhaka izinto iya kubangela ukulibaziseka ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48 ezingayi kubalwa ukuya kwixesha lakho lomculo.
6.Ukuba kunokwenzeka, soloko usithumela izinto zakho zitywinwe kwiphakheji oyifumene kuyo.
Ndidinga njani ukubonelela ngezinto?
Ingxowa nganye, itreyi, njl.njl kufuneka ibhalwe ngokucacileyo ngenxalenye yenxalenye edweliswe kwibhili yakho yezinto.
1.Kuxhomekeke kwinkonzo yendibano oyikhethileyo, sinokusebenza ngetheyiphu esikiweyo yalo nabuphi na ubude, iityhubhu, iileyili kunye neetreyi. Sicinga ukuba kuya kuthathwa ukhathalelo ukukhusela ukuthembeka kwamacandelo.
Izinto ezi-2.If ukufuma okanye ukuma okungacacanga, nceda upakishe ngokufanelekileyo kulawulo lwe-static kunye / okanye ekutywinweni.
Izinto ze-3.SMT zibonelelwe ngokukhululekileyo okanye ngobuninzi kufuneka zithathelwe ingqalelo njengokubekwa kwemingxunya. Kuya kufuneka usoloko uqinisekisa nathi kuqala ngaphambi kokucaphula umsebenzi ngezinto ezikhululekileyo ze-SMT. Ukuzithumela ngokukhululekileyo kunokubangela umonakalo kwaye kuya kubiza iindleko ezingaphezulu ekuphatheni. Kuphantse kuhlala kungabizi mali ininzi ukuthenga umtya omtsha wezinto ukuze sizame ukuzisebenzisa zikhululekile.